Chigadzirwa Chigadzirwa - Inotevera Supply Chain
Kudonhedza ndeimwe yemhando dzakakurumbira dzemabhizinesi mazuva ano. Yakazvisimbisa pachayo seyakajeka basa ine yakaderera mari uye inoshanduka. NextsChain ndeimwe yakadaro bhizinesi mupi, iyo inoshanda senzvimbo inoshanda yekumisikidza yako yemahara kudonhedza bhizimusi pasirese.
Nextschain yakasarudza zviuru zveVatengesi vepamusoro vanopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekutengesa nemutengo wepamusoro. Nextschain ine zvikamu zvakasiyana zvevatengesi vachishandisa iyo Shopify APP, ichivagonesa kusarudza kubva kuzviuru zvezvigadzirwa zvinokunda kubva kukatalog yavo uye vozviwedzera muchitoro chavo.
Nextschain ndeimwe-yekumira E-commerce mhinduro dzeDropshipping, iyo inobvumidza vashandisi kuti vatarise pane yekutengesa uye yekushambadzira chikamu, sevamazvikokota avo vanogadzira hesheni uye nzira yekutumira. Mushure mekutengesa, zvese zvinofanirwa kuitwa kubhadhara uye NextsChain inozadzisa mirairo yako uye wozotumira odha mapakeji kunze uchishandisa nzira dzekutumira nekukurumidza, uye nekuendesa iyo yekutevera nhamba kune yako maodhi. Sezvineiwo, NextsChain inobatsira vatengesi vedu kuchengetedza ingangoita 80% yenguva yako.
Nekuda kwemakwikwi akawandisa, kuvaka zita rechiratidzo kwakabuda sedanho rinokosha remabhizinesi. NeNextschain, vashandisi vanogona kupurinda iyo logo yesarudzo yavo pabhokisi repakeji kuti vabude mumakwikwi. Nekuda kweizvozvo, vatengesi vanogona kuvaka kuvimba mukufamba kwenguva nevatengi vavo uye kunakidzwa nekuvimbika kwevatengi kukuru.
Nextschain yakabuda seimwe yemhando dzinovimbwa kwazvo mumusika wepasirese. Kuchengetwa kwavo kwevatengi kunopa yakanakisa post-kutengesa sevhisi. Zvekuvaka kuwanikwa pamhepo, ndeimwe yenzira dzinokurumidza kutanga nemari yakaderera. Nemabasa epamusoro ekudonhedza Nextschain, vashandisi vanogona kutarisisa mhando pamwe nehunhu uye kusimudzira bhizinesi ravo.